एशियाकै धनी मुकेश अम्बानी जिम्मेवारी हस्तान्तरणको तयारीमा, २०८ अर्ब डलरको सम्पत्ति के गर्लान ? « Bizkhabar Online
एशियाकै धनी मुकेश अम्बानी जिम्मेवारी हस्तान्तरणको तयारीमा, २०८ अर्ब डलरको सम्पत्ति के गर्लान ?
23 November, 2021 12:05 pm
काठमाडौं । भारत र एशियाका सबैभन्दा ठूलो धनी मुकेश अम्बानीले आफ्नो २०८ अर्ब डलरको व्यापार साम्राज्य नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले आगामी दिनमा कुनै किसिमको विवाद नआओस् भनेर उत्तराधिकारको फुलप्रुफ योजना बनाइरहेका छन् । यसका लागि उनले विश्वभरका अर्बपति परिवारको उत्तराधिकारी मोडलको अध्ययन गरेका छन् । यसमा वाल्टनदेखि कोच परिवार समावेश छ । ब्लुमबर्गका अनुसार अम्बानीले पछिल्लो समय यो प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार ६४ वर्षीय अम्बानीले वालमार्ट इन्कको वाल्टन परिवारको मोडललाई सबैभन्दा बढी मन पराएका छन् । उनी परिवारको होल्डिङ्सलाई ट्रस्टमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छन् जसले देशको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडलाई नियन्त्रण गर्नेछ । अम्बानी, उनकी पत्नी नीता अम्बानी र उनीहरूका तीन छोराछोरीको नयाँ इकाईमा हिस्सेदारी हुनेछ र यसको बोर्डमा हुनेछ। यस बोर्डमा अम्बानी परिवारका विश्वासिलो व्यक्ति सल्लाहकारको भूमिकामा रहनेछन् ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीको व्यवस्थापन पेशेवर व्यक्तिको हातमा हुनेछ जसले रिलायन्स र यसको व्यवसायलाई हेर्नेछन् । रिलायन्सको व्यवसाय रिफाइनिङ, पेट्रोकेमिकल्सदेखि दूरसञ्चार, इ–कमर्स र हरित ऊर्जासम्म फैलिएको छ। अम्बानीले हाल धेरै विकल्पहरू विचार गरिरहेको छ र अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय लिएको छैन् । रिलायन्सका प्रतिनिधि र अम्बानीले यस सम्बन्धमा ब्लूमबर्ग न्यूजको इमेल र फोन कलको जवाफ दिएनन् ।
अम्बानीले रिलायन्सको अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिने कुनै सार्वजनिक घोषणा गरेका छैनन्, तर उनका छोराछोरीहरू अहिले व्यवसायमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । जुनमा शेयरधारकहरूलाई सम्बोधन गर्दै, अम्बानीले आफ्नो आकाश, ईशा र अनन्तले रिलायन्समा मुख्य भूमिका खेल्ने संकेत गरेका थिए। मुकेश अम्बानी र उनका भाइ अनिल अम्बानीबीचको विवादलाई ध्यानमा राख्दै मुकेश अम्बानी निकै सावधानीपूर्वक हिँडिरहेका छन् ।
वाल्टन परिवारको मोडल के हो ?
स्रोतका अनुसार अम्बानीले वालमार्ट इंकको वाल्टन परिवारको मोडेललाई सबैभन्दा धेरै मन पराएको छ । सन् १९९२ मा कम्पनीका संस्थापक सैम वाल्टनको मृत्युपछि आफ्नो व्यवसाय हस्तान्तरण गर्ने तरिका अम्बानीलाई मन परेको छ । विश्वको सबैभन्दा धनी परिवार रहेको वाल्टन परिवारले सन् १९८८ देखि कम्पनीको दैनिक कारोबार प्रबन्धकहरूलाई हस्तान्तरण गरेको थियो र त्यसको निरीक्षण गर्न बोर्ड स्थापना गरेको थियो ।
सामका जेठा छोरा रोब वाल्टन र उनका भतिजा स्टुअर्ट वाल्टन वालमार्ट बोर्डमा छन् । सन २०१५मा, सामका नातिनी ग्रेग पेनरलाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाइएको थियो । शेयरधनीभन्दा परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर आलोचना भएको थियो । सामले आफ्नो मृत्युको ४० वर्षअघि सन् १९५३ मा उत्तराधिकार योजनामा काम गर्न थालेका थिए । उनले आफ्नो पारिवारिक व्यवसायको ८० प्रतिशत ४ सन्तानलाई दिए ।
मुकेश र अनिल बीचको विवाद
८० र ९० को दशक धीरुभाई अम्बानीको नेतृत्वमा रिलायन्सको लागि धेरै शानदार थियो, तर २००२ मा धीरुभाई अम्बानीको मृत्यु पछि, सबै बिग्रन थाल्यो । दुई दाजुभाइबीच झगडा भयो र व्यापार बाँडफाँड गर्नुप¥यो । अनिल अम्बानीको सेयरमा कम्युनिकेशन, पावर, पूँजी आयो भने मुकेश अम्बानीले रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको कारोबार पाए ।
धीरुभाई अम्बानीको मृत्युपछि दुई सन्तानबीचको विवाद उत्पन्न भएपछि उनीहरुको आमाले नै विवाद मिलाउन हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो । २००२ मा, तिनीहरूको विवाद सतहमा आयो, त्यसपछि उनकी आमा नाइटिंगेल बेनले कम्पनीलाई दुई भागमा बाँडेर दुवै छोराहरूलाई दिइन । यो विभाजनमा तत्कालीन आईसीआईसीआई बैंकका अध्यक्ष कामतलाई समेत बोलाउनुपरेको थियो । दुई दाजुभाइबीच करिब ४ वर्षसम्म विवाद चलेको थियो ।- नवभारत टाइम्सबाट
खोप लगाइसकेका र सङ्क्रमण भएका व्यक्तिमा पनि ओमिक्रोन तीव्र रुपमा सर्ने डब्लूएचओको दाबी, देखिन्छन यस्ता असर
काठमाडौं । कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन खोप लगाइसकेका र एक पटक सङ्क्रमित भइसकेका व्यक्तिलाई सजिलै